Kitapo vita amin'ny voninkazo azo zakaina China Vata voninkazo voninkazo ho an'ny mpanamboatra sakaiza sy mpamatsy | Huaguang
Kitapo vita amin'ny voninkazo azo zakaina azo zakaina ho an'ny sipa
Betsaka ny fomba voninkazo, homentsika azy ireo amin'ny olona isan-karazany, samy hafa karazana, maneho dikany samy hafa. Na dia tsy lalina loatra aza ny fahazoana ny voninkazo, dia fantatry ny olona maoderina fa mandefa raozy ho an'ny olona tia azy, miangona any amin'ny loholona ary lilia ho an'ny namany. Misy fehezam-boninkazo, harona tanana, harona talantalana, fonosana boaty voninkazo, samy manana ny anjara asany sy ny vokany avy ny tsirairay.
Ohatra, amiko, te-handray fehezam-boninkazo ho an'ny Andron'ny mpifankatia aho, izay tena lehibe tokoa, indrindra ny manintona ny maso ary nanamafy ny fahatokisako azy. Ireo izay manome fanomezana ho an'ny mpitarika sy ny loholona dia mitondra sobiky voninkazo sy boaty voninkazo mba hampisehoana fanajana sy hifanaraka amin'ny satan'izy ireo. Indraindray, ny toetran'ny mpandray voninkazo dia saro-kenatra kokoa, ambany-key na ny tontolo iainana dia tsy mety amin'ny fanaovana dokambarotra loatra dia afaka mandefa boaty voninkazo.
Amin'izao fotoana izao, boaty voninkazo dia malaza amin'ny antony telo.
1: miaro ny voninkazo tsy mahazo fahavoazana, ka ny voninkazo dia mbola ao anaty toe-javatra tsara rehefa alefa.
2: ambany-key, avy any ivelany tsy afaka mahita mivantana raha, mamonjy olana sy fifanakalozan-kevitra tsy ilaina.
3: avo lenta, ny voninkazo nalefan'ny boaty fanomezana dia azo antoka fa avo lenta kokoa noho ny fehezam-boninkazo sy harona, izay mahatonga ny fehezam-boninkazo iray manontolo ho avo lenta kokoa.
Matetika amin'ny andro manan-danja, vahiny mpivarotra voninkazo isan-karazany amin'ny riandrano tsy misy farany, mifidy voninkazo homena ny olona manan-danja.
Misy karazana fanomezana telo: boaty fanomezana toradroa, boaty fanomezana efa-joro, boaty fanomezana roa ary fo. Voninkazo boaty fanomezana toradroa, voninkazo boaty fanomezana mahitsizoro mety ho an'ny mpitarika, loholona sns hanehoana ny maha-zava-dehibe azy ireo. Boaty fanomezana roa sosona alohan'ny voninkazo eo amin'ny afo manokana tamba-jotra, ny sosona roa ambony sy ambany dia misy vatasarihana, sosona tena tsara dia voninkazo vaovao. Ny sosona tsara dia ny fametrahana ny fanomezana, lokomena, rojo sns. Betsaka ny olona no nanahaka ny voninkazo boaty fanomezana roa, mivantana tamin'ny Internet, ny sakaizako ihany no nahazo fehezam-boninkazo sandoka manjavozavo, tonga tampoka ny hatairana.
Ny fetin'ny mpifankatia no be mpitia kokoa dia ny voninkazo boaty fanomezana miendrika fo, ny endrika isehoan'ny fitiavana dia tantaram-pitiavana sy manokana, misy tsipìka tsara tarehy, avelao ny olona tsy ho afa-mieritreritra ny kanto ao anatiny. Ny voninkazo miendrika fo dia tsy lafo ihany koa. Mitovy amin'ny voninkazo miendrika toradroa izy ireo, saingy tsara kokoa.
Teo aloha: baoritra fitahirizana taratasy boaty volon'ondry akanjo ba
Manaraka: sarony avy amin'ny boaty fitahirizana trano mitazona baoritra boaty taratasy
Logo namboarina namboarina pirinty ambongadiny Gi ...